Fanontaniana 5 hapetraka amin'ny consultant amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana | Martech Zone
Asabotsy 18 Febroary 2017 Asabotsy 18 Febroary 2017 Douglas Karr
Mpanjifa novolavolainay paikady infographic isan-taona fa tao amin'ny biraonay tamin'ity herinandro ity. Toy ny orinasa maro dia nandalo ny coaster roller ny fananana consultant SEO ratsy izy ireo ary ankehitriny dia nanakarama orinasa mpanadihady SEO vaovao hanampy azy ireo amin'ny famahana ny simba.
Ary nisy ny simba. Ny ivon'ny paikadin'ny SEO ratsy dia ny fiverenana miverina amin'ny alàlan'ny habaka mampidi-doza. Ankehitriny dia mifandray amin'ireo tranonkala ireo ny mpanjifa mba hanaisotra ireo rohy, na tsy hanaiky azy ireo amin'ny alàlan'ny Google Search Console. Raha ny fijerin'ny orinasa dia ity no toe-javatra ratsy indrindra. Ny mpanjifa dia tsy maintsy nandoa consultants roa ary, nandritra izany fotoana izany, very laharana sy ny orinasa mifandraika amin'izany. Izany vola very izany dia natokana ho an'ireo mpifaninana aminy.
Maninona no mitolona ny indostrian'ny SEO
Ny algorithman an'i Google dia mitombo hatrany amin'ny fahaizany mametra sy manatsara ny valiny miorina amin'ny fitaovana, toerana ary fitondran-tenan'ny mpampiasa. Mampalahelo fa mpanolo-tsaina sy orinasa SEO maro no nanambola be tamin'ny fizotrany taona vitsivitsy lasa izay izay tsy misy ifandraisany intsony. Nanangana mpiasa izy ireo, nanambola fitaovana, ary nampianatra ny tenany amin'ny paikady izay tsy lany andro fotsiny fa hampidi-doza ny mpanjifa raha ampiasaina ankehitriny.
Misy taonina ny hubris ao amin'ny indostrian'ny SEO. Sarotra amiko ny hino fa ny consultant vitsivitsy, na ny forum fikarohana ankafiziko, na ny masoivoho iray manontolo aza dia manana fahaizana mihoatra lavitra ny an'arivony tapitrisa dolara izay ananan'i Google amin'ny fanatsarana hatrany ny algorithman'izy ireo.
Telo ihany ny lakilen'ny SEO maoderina
Ity lahatsoratra ity dia mety hahasosotra ny olona sasany amin'ny indostria ezahintsika harahina, saingy tsy miraharaha aho. Reraka aho mahita ny mpanjifa tsy maintsy maka ireo sombin-javatra ary mandany ny vola ilain'izy ireo hialana amin'ny paikady biolojika tsy dia tanterahina. Tsy misy afa-tsy lakile telo isaky ny paikady SEO ambony indrindra:
Ajanony ny tsy firaharahana torohevitra momba ny motera - Ny motera fikarohana rehetra dia manome loharanom-pahalalana tsy mampino ho antsika mba hahazoana antoka fa tsy mandika ny fomba fampiasan'izy ireo izahay ary manaraka ny fomba faran'izy ireo tsara indrindra. Mazava ho azy, indraindray io torohevitra io dia manjavozavo ary matetika dia mamela loofoles - saingy tsy midika izany fa ny consultant SEO dia tokony hanery ny fetra. Aza manao. Ny zavatra mandeha ankehitriny izay mifanohitra amin'ny torohevitr'izy ireo dia mety handevina tranokala amin'ny herinandro ambony satria mahita ny loophole ny algorithm ary manasazy ny fampiasana azy.
Atsaharo ny fanatsarana ny milina fikarohana ary atombohy ny fanatsarana ny mpampiasa Search Engine - Raha mamorona tetika tsy misy fomba voalohany alohan'ny mpanjifa ianao dia manimba tena. Ny motera fikarohana dia maniry fanandramana lehibe ho an'ireo mpampiasa motera fikarohana. Tsy midika izany fa tsy misy lafiny teknika amin'ny karoka hanampy hifandraisana amin'ireo motera fikarohana sy hahazoana valiny avy amin'izy ireo… fa ny tanjona dia ny hanatsara hatrany ny traikefan'ny mpampiasa fa tsy ny milina fikarohana.
Mamokatra, manolotra ary mampiroborobo atiny mahavariana - Lasa ny andro famokarana atiny ho fahana Ny filan-tsakafo tsy mety afa-po amin'ny Google. Ny orinasa tsirairay dia nanamboatra sy nanafaingana ny tsipika fivorian'ny votoatiny mba hanandrana hirotsaka amin'ny fitambaran-teny marobe. Tsy niraharaha ny fifaninanana ireo orinasa ireo ary tsy niraharaha ny fihetsiky ny mpitsidika azy ireo amin'ny loza mety hitranga. Raha te handresy amin'ny laharana ianao dia tsy maintsy mandresy amin'ny famoahana ny atiny tsara indrindra amin'ny lohahevitra rehetra, asehoy amin'ny medium efa voavolavola tsara, ary hampiroborobo azy mba hahazoana antoka fa hahatratra ny mpihaino izay hizara izany - amin'ny farany mampitombo ny laharany amin'ny motera fikarohana.
Inona avy ireo fanontaniana tokony hapetrakao amin'ny consultant SEO anao?
Raha mieritreritra an'izany rehetra izany ianao dia tokony ho afaka hametra ny fanontaniana apetrakao amin'ny mpanolo-tsaina SEO anao hahazoana antoka fa mahay izy ireo ary miasa ho an'ny tombontsoan'ny orinasao. Tokony hiasa ny mpanolo-tsaina ny milina fikarohana anao mba hahazoana antoka fa manana fotodrafitrasa tena tsara ianao, hahatakatra ny fahazoana, hikolokolo, ary hiasa miaraka aminao mandritra ny ezaka ataonao omni-Channel hampitombo ny fahombiazan'ny fanatsarana ny motera fikarohana.
Ianao ve mazoto soraty ny ezaka rehetra ataonao mampihatra amin'ny antsipiriany ny ezaka ataonay amin'ny fikarohana izahay - ao anatin'izany ny daty, asa, fitaovana ary tanjon'ny ezaka? Ireo consultant SEO izay manao asa lehibe dia tia mampianatra ny mpanjifany amin'ny ezaka rehetra. Fantatr'izy ireo fa tsy ny lakilen'ny fitaovana, ny fahalalany ny motera fikarohana izay andoavan'ny mpanjifa. Fitaovana toy ny Search Search Console no zava-dehibe - saingy ny paikady ampiasana amin'ny angon-drakitra no manakiana. Ny consultant SEO mangarahara dia consultant SEO tsara, izay iarahanareo miasa tanteraka amin'ilay ezaka.
Ahoana no hamaritanao aiza ny ezaky ny SEO tokony ampiharina? Ity dia fanontaniana iray izay tokony hametraka fanontaniana. Ny consultant SEO anao dia tokony ho liana tanteraka amin'ny orinasanao, ny indostriao, ny fifaninananao ary ny mampiavaka anao. Ny consultant SEO izay mandeha fotsiny ary mamokatra lisitry ny teny lakile dia manara-maso ny laharan'izy ireo, ary moa ve ianao manosika ny atiny ho azy ireo nefa tsy mahatakatra ny orinasanao dia mampatahotra. Manomboka ny fifampiraharahana SEO rehetra izahay amin'ny fahafantarana ny fomba mifanaraka amin'ny paikady omni-fantsona ankapobeny. Tianay ho fantatra ny lafiny rehetra amin'ny orinasa mba hahazoana antoka fa manangana paikady tsy manam-paharoa izay mitondra ny valiny ilain'ny orinasa izy fa tsy ny anay mieritreritra mety mila izy ireo.
Azonao faritana ve ny lafiny teknika amin'ny ezaka ataonao ary inona no hanampianao anay hampihatra ny teknolojia? Misy fiezahana vitsivitsy ilaina amin'ny fampidirana ny atiny amin'ny motera fikarohana - ao anatin'izany ny robots.txt, sitemaps, hierarchy tranokala, fanodinana alàlana, fananganana HTML, pejy finday haingana, sombin-javatra manankarena, sns. Misy koa antony lehibe toy ny hafainganan'ny pejy, ny cache, ary ny fandraisana andraikitra amin'ny fitaovana izay hanampy - tsy amin'ny fikarohana ihany fa miaraka amin'ny fifandraisan'ny mpampiasa.
Ahoana no refesio ny fahombiazan'ny SEO anao ezaka? Raha milaza ny consultant SEO anao fa ny fifamoivoizana biolojika sy ny laharam-pahamehana ny fikajiana azy ireo dia mety hanana olana ianao. Ny consultant SEO anao dia tokony handrefy ny fahombiazanao amin'ny habetsaky ny orinasa vokarinao amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana biolojika. Fe-potoana. Ny fananana laharana lehibe nefa tsy misy fisondrotana azo antoka amin'ny valin'ny asa aman-draharaha dia zava-poana avokoa. Mazava ho azy, raha nitana ny laharana ny tanjonao… azonao atao ny mieritreritra an'io tenanao io.
Manana a fiantohana vola? Ny consultant SEO dia tsy afaka mifehy ny lafiny rehetra amin'ny paikadin'ny varotra miditra ankapobeny. Ny consultant SEO dia afaka manao ny tsara amin'ny zava-drehetra, ary mbola afaka mihemotra ao ambadiky ny mpifaninana ianao izay manana fananana betsaka kokoa, mpihaino marobe ary marketing amin'ny ankapobeny tsara kokoa. Na izany aza, raha very ny habetsaky ny fivezivezena sy ny laharam-pikarohana nataonao satria nanosika anao hanana paikady mahatsiravina izy ireo dia tokony ho vonona hamerina ny ampahany amin'ny ezak'izy ireo. Ary raha ampiasain'ny motera fikarohana ianao noho ny fihetsik'izy ireo, dia tokony ho vonona hamerina ny fampiasam-bolanao izy ireo. Hilainao izany.
Raha fintinina dia tokony tsy hino ny consultant SEO rehetra ianao izay tsy mitady izay hahasoa anao indrindra, tsy manana fahaiza-manao marketing amin'ny ankapobeny, ary tsy mangarahara amin'ny ezaka ataon'izy ireo. Ny mpampianatra anao dia tokony hampianatra anao tsy tapaka; tsy tokony hanontany tena ianao hoe inona no ataon'izy ireo na maninona ny fiovan'ny vokatra biolojika rehefa miova izy ireo.
Rehefa ao anaty Fisalasalana
Niara-niasa tamin'ny orinasa lehibe iray izahay izay tsy latsaky ny folo ny mpanolo-tsaina SEO niasa niaraka tamin'izy ireo. Tamin'ny fiafaran'ny fifamofoana dia roa monja izahay. Samy nanoro hevitra momba ny mpanolo-tsaina maro an'isa izay nanana ny mpanjifa izahay lalao ny rafitra - ary rehefa nilatsaka ny marotoa (ary nilatsaka mafy) - teo izahay hanadio ny korontana.
Ny consultant SEO anao dia tokony handray ny hevitra faharoa avy amin'ny orinasa mpiara-miasa. Efa nanao famotopotorana fatratra ho an'ireo orinasa vaventy mihitsy aza izahay mba hanadihady sy hamantatra raha toa ny teknikan'ny blackhat na tsia ny mpanolotsaina SEO na tsia. Mampalahelo fa isaky ny fifamofoana izy ireo. Raha mampiahiahy ianao dia mety hahita olana ianao.
Tags: blackhat seopaikady blackhat seovoajanaharyfikarohanapaikadin'ny motera fikarohanaSEOseo fahazotoanaseo fanadihadiana
21 Feb 2017 tamin'ny 11:13 maraina
Hey Douglas! Torohevitra tsara! Tiako manokana ny filazanao hoe "Atsaharo ny fanatsarana ny milina fikarohana ary manomboka manatsara ny mpampiasa Search Engine". Nofantsihanao fotsiny ny famaritanao ny fomba fiasan'ny SEO ankehitriny. Nanontany tena aho hoe, mamporisika orinasa kely hanakarama consultant SEO na orinasa ve ianao?